Global Voices teny Malagasy · 2 Janoary 2013
Tantara tamin'ny 02 Janoary 2013
Azia Atsimo02 Janoary 2013
Nisy indray ankizivavy vazimba teratany iray novonoina rehefa avy naolana tamin'ny fomba mahatsiravina tany Bangladesh. Ilay tra-doza, Khomaching Marma (14 taona) dia mpianatra amin'ny kilasy taona faha-8. Ity fanolanana sy famonoana feno habibiana ity dia nanaparitaka indray ny hatezerana sy ny haromontana nanerana ny firenena. Nanao hetsi-panoherana koa ireo mpisera...
Mediam-bahoaka02 Janoary 2013
Satria tonga tamin'ny farany ny taona, dia tianay indrindra ny haneho ny fankasitrahanay tamin'ireo asa mafy, famoronana sy fikarakaràna nataon'ny maro tato anatin'ny vondrom-piarahamonin'ny Global Voices. Taonan'ny firoboroboana nitalakotrokotroka sy fahombiazana ho an'ny GV ny 2012. Ireto ny sasany nisongadina